Nesikhundla salo muntu bafanelwe ngelakho, ngaphandle asebenzise uxhumano lomndeni noma imali. Kusukela ezinsukwini zakuqala iMpi Yezwe II wakhonza njengombonisi umkhuzi inkampani. Waba khona izimpi yisakhiwo sodumo eLeningrad futhi eziyinkimbinkimbi evikelwe kwaseStalingrad phambi nesi-Ukraine. Emva umsebenzi impi Sergey Fedorovich ekhuphuka. Futhi ngo-1982 yena yanikezelwa Hero isihloko eSoviet Union, futhi ngemva konyaka Akhromeev - Marshal zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa. Izingane ezimbili, abazukulu, unkosikazi, uthando wezwe - konke kulungile. Kodwa ngo-August 24, 1991-Sergey Fedorovich umzimba utholakale eshonile, elenga isibambo window in a awulutho kuNkulunkulu.
Military Sergey Fedorovich waqala eneminyaka engu-17 ngesikhathi engena Naval Academy. Ngemva konyaka, lo mfana waphoqeleka ukuya yingxenye Ibutho elihamba of amasosha ukuvikelwa Leningrad. Ngemva ekuvimbeni isisindo sawo sasiyitalenta 40 kg, nasemilenzeni freezed unqanyulwe zihloselwe odokotela, isimangaliso wahlala Akhromeeva. Ngo-1942, umfana uya izifundo lieutenants ngesikhathi Astrakhan College, okwathi ngemva kwayo wazala induna Leli qembu sokuzingela, futhi ngo-1944, nguye induna Gunners umshini Ibutho.
Ngo-1945, uSergei kokuqeda izifundo zakhe Esikoleni Officers Ephakeme. Misa ukuthuthukisa ulwazi yezempi ngeke Ngokuzayo Marshal Akhromeev. Biography Sergey Fedorovich ngokuya imfundo iqukethe uhlu impumelelo:
1952 - I-Academy of Armored Forces, uzothatha indondo yegolide;
1967 - Academy of the Jikelele Abasebenzi, wendondo yegolide. Futhi lowo mnyaka waba induna yempi kwabasebenzi.
Lapho kumbuthano izihlobo eduze ngokushelela futhi zonke ngenxa yothando, waphinda angifuni ukwabelana nabanye noma yiluphi ulwazi. Kungenzeka ukuthi Akhromeeva umndeni kwakulungile, ngoba ulwazi mayelana nezihlobo biography of kancane.
Kuyaziwa ukuthi umkakhe uTamara Sergey ababehlangana kulelo inombolo esikoleni eMoscow 381 kulolu cwaningo ngokuhlanganyela. Lapho ekhonza njengesikhonzi esishumayela isikhathi umkhuzi Ibutho eliseMpumalanga Ekude, le marshal esizayo Akhromeev umndeni wakhe yazuza omunye umuntu. Indodakazi yabo Tatiana wazalwa. Ngemva kokuthuthela e-Moscow, uSergey uTamara babe abazali okwesibili. Ngalesi sikhathi, Sergey Fedorovich unikezwa elisezingeni jikelele.
Izikhungo ngaphansi Gorbachev
Maphakathi nawo-80s Sergey Fedorovich wayengomunye walabo owayekholelwa ukuthi iziphathimandla uqalise kabusha. Ngakho-ke, ukukhetha owayenguNobhala Jikelele kumuntu Mikhail Sergeyevich Akhromeeva banesifiso ukusebenza. Wabona Gorbachev isithakazelo nenjongo ukuqonda inkinga lempi.
Dmitry Yazov, njengoba uNgqongqoshe Wezokuvikela kanye nezinye Sergey Fedorovich, lapho kuxoxwa naye wathi ngaphambi izenzakalo ka 1991 Akhromeev wazama ukungena "iqembu ipharadesi." Leli gama esingashiwongo lenkampani lapho uNgqongqoshe Wezokuvikela, wadala ngaphansi Stalin. Kodwa kwakungeyona bangene kukho, njengoba Gorbachev aphakanyisiwe Sergey Fedorovich ukuthumela umeluleki wayo.
Lesi simo kwaba ebulalayo. Akhromeev - Marshal zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa - wayengafuni ukubona ukuthi ukubangisana kwemibuso emikhulu ebhubhisa isimiso sezinto sayo sokuvikeleka.
Isendlalelo basayine isivumelwano kwezikhali
Lapho umeluleki umongameli lapho Gorbachev baba Marshal Akhromeev, biography yokugcina antjintje mlando entsha ukuthi Sergey Fedorovich kwaholela imfihlakalo sokufa. Kudala ngawo-1970 e-United States ne-Soviet Union yasungulwa amasu missile isiqondiso, okuvumela ukuba sifinyelele ukunemba ukushaya ilitshe. Lokhu kwaba ukuqala umjaho ukuthuthukiswa kohlelo ukuzivikela emkhakheni zenuzi. Ngo-1976, iSoviet Defense uNgqongqoshe izinqumo Ustinov ekwakheni InterContinental ezicitshwayo ballistic (ICBMs) ukumboza isiqondiso entshonalanga nge warhead ezingaba hit okuhloswe eziningana ngesikhathi esisodwa. Lapho imingcele zeSoviet Union sasithe kakade ibekwe ezicitshwayo 300, futhi eYurophu kuqashwe 572 izinkulumo US missile waqala phakathi kwamazwe.
Inkhulumomphendvulwano, eyaqala ngo-1980, usezuze izici ukusilela ngemva kokufa D. F. Ustinova. Ngaphambi kwalokho, izingxoxo isikhala izikhali futhi "euromissiles" I elaseSoviet Union okuhloswe ukuba kwenziwe ngayo indiza. Futhi ngasekuqaleni kuka-1986 M. S. Gorbachev ukubeka phambili uhlelo of ukuqedwa kancane kancane zenuzi, okuyinto ubonakala njengeNkosi yokunivumela-USSR.
Gorbachev ezihlongozwayo ohlelweni iyashaqisa Japan, futhi kamuva China kanye neqiniso lokuthi eSoviet Union kuyokudlulisela ezicitshwayo ngezwe. Ekupheleni 1987 isinqumo mayelana nodaba ukubhujiswa Lesisemkhatsini-ibanga short-range ezicitshwayo ngaphansi kokuqondisa abahloli onguchwepheshe.
Akhromeev - Marshal zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa - Gorbachev ke libike ukuthi kwezikhali senzeka unilaterally neSoviet Union elahlekile lokulwa yayo umthamo. Empeleni, Melika oluqeda ephelelwe yisikhathi amandla ezempi, kuyilapho ezicitshwayo ulwandle osuselwe ingozi efomini kwezikhali zenuzi enikeziwe ukulawula yezwe Soviet, e-United States, zigciniwe. Likhuluma mlando, umbhali u-Alexander Shirokorad, iSoviet Union phansi ingxenye enkulu R-36, okuyinto eMelika ayebhekwa "Sathane".
US aphakathi ebanga ezicitshwayo wabhubhisa okukhishwa kukho izingcezu 100, futhi e-USSR - kahlanu. Ngokusemthethweni, womabili la mazwe bekumelwe disarmed ngamanani alinganayo.
Isenzo sokugcina, ekugcineni Akhromeeva badumazeke kunqubomgomo Gorbachev sika - ukubhujiswa "Oka" izikhali ezingcono ningaweli ngaphakathi kwemigomo labo babeboshelwe ekubhujisweni ngaphansi inkontileka. Kodwa ngemva Wezangaphandle Shultz ngokushesha Gorbachev uyavuma ukunciphisa isethi tekusebenta futhi Tactical. Sergey Fedorovich uyaqonda ubulima isimo futhi ucela Gorbachev hhayi ukwenza kanjalo. Ukuze lapho yokugcina uthe categorical "akekho."
Ukufa Marshal Akhromeeva
Ngo-August 1991, uSergei Fedorovich nomkakhe nabazukulu eseholidini e Sochi. Iqiniso lokuthi elungiselela etat Ukuketulwa, akazi, yize yayingumuntu e ubungane Yazov, owayenguNgqongqoshe wezokuVikela. 19 nyanga nonyaka Akhromeev landizela eMoscow. Ngalesi sikhathi, lapho ezibiyele sidalwe eKomidi Izimo eziphuthumayo, ababemelene kabusha eU.SSR Union of EnguMbusi States. Lapho efika eMoscow Sergey Fedorovich okunikelwe ilungu leKomiti eziphuthumayo ukusiza ukuthola ulwazi ezindaweni emkhakheni. Lilele ingxenye yakhe, ilungu Icebo lika kodwa wayengesona neze.
Ukuhluleka Icebo lika uphatheke kabi kakhulu Sergey Fedorovich, ngemva Marshal Akhromeev (izihlobo kamuva wathi lokhu ngesikhathi enengxoxo) wayemi ukuba aboshwe. Ngo-August 25, esidunjini we Hero zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa atholakala ehhovisi Kremlin. Wagibela entanyeni kwaba iluphu of Twine mail.
Ukungabaza mayelana nokuzibulala
Sergei Akhromeeva ukufa usalokhu uyimfihlakalo ukuthi wathatha isinyathelo bebodwa noma usizo ngaphandle? Into yokuqala ukuthi uxhumanise abacwaningi ukubulala ngenhloso - ingukufa okuhlazisayo ababengenamandla okukuthola isikhulu, ngoba Akhromeev - Marshal zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa. Hangman kubhekwe isikhali ukubulala ngoba amambuka, futhi wayengasakwazi.
Eyesibili umbuzo ukuzibulala - Sergey Fedorovich isimo izolo. Ngaphambi kokufa kwakhe (ukubulala) Ngakho, wayengavunyelwe ecindezelekile, kunalokho, Akhromeev ntambama Agasti 23, wayevakashele indodakazi yakhe, futhi ngosuku olulandelayo, ngaphambi kokuya emsebenzini, uthembise nomzukulu wakhe ukuhamba ndawonye lapho ephindela. Ukuziphatha kwaba khona ukuthula okukhulu, futhi inguqulo olusemthethweni, yayisivele uzilungiselele ukuthi ngengqondo iluphu ngokwami.
Kukhona inguqulo lokho ayelakho bazibulala bona, kodwa okwenziwe okungukuthi, kwakusijabulisa ukuba lokhu. Cishe, inikezwe into adle noma aphuze. Isidumbu wabantu isikhulu ehhovisi 10 amahora, akekho wayenesithakazelo isiphetho Sergei Fedorovich, ngaphandle umndeni ukuthi akazange ukubeka ifoni ngethemba lokuthi phezu kolunye uhlangothi abantu bomdabu waphendula.
Imfihlakalo kokufa Marshal Akhromeeva, umngcwabo
Kulokhu osekushiwo kuyaphawuleka ukuthi umholi Soviet lempi wayengakufanelekeli ukuphumula iyiphi Vagankovsky noma Novodevichy emathuneni. Kuvele umlandvomufi awuzange yashicilelwa "Pravda", futhi ahambisane naye ohambweni lwakhe yeta inombolo okuncane kwabantu.
Ngaphandle nodumo ngaphandle kokunikeza isikhundla yesiko wangcwatshwa Marshal Akhromeev. Photo ithuna nesizotha ungabona ngenhla. Lena konke kusele olunezimiso, ume isibindi Sergey Fedorovich.
Ngisho nangesikhathi avele elele phezu komhlabathi, yenziwa yini umKristu, hhayi isenzo ngenhlonipho nokuhlonipha oshonile Sergey Fedorovich: kumbiwa amathuna Akhromeeva nokususa iyunifomu yakhe izindondo. Cabangela leli qiniso njengoba indlela yokuthola izinto ezingenangqondo, ngoba kukhona ezinye izindlela lokuthola kalula imali zihlale. Kodwa iqiniso lokuthi lesi senzo senziwa Vandal sokufihla ubufakazi, abaningi abacwaningi mlando kubonakala kufanelekile.
Lalinjengenqaba ngesiGreki. Uyini lalinjengenqaba, lapho kubonakala sengathi (isithombe)
Kitten Scottish - golden kusho
Umkhuleko wocela cwaningo. Ubani futhi ukuthandaza?